Khelkud Post – Page2– ZoomNP
काठमाडौँ । एएफसी एशियन कप २०१९ को छनोट अन्तर्गत फिलिपिन्स विरुद्धको खेलका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोवाटोमा २० दस्सीय टोलीको घोषणा गरिएको हो । बन्द प्रक्षिणमा रहेका २७ जनाबाट २० जना अन्तिम छनौटमा परेका हुन् ।
एसियन कप छनोट अन्तर्गत नेपाल र फिलिपिन्सबीच चैत १५ अर्थात मार्च २८ मा फिलिपिन्सको रिजाल मेमोरियल रंगशालामा पहिलो खेल हुनेछ । अन्तिम छनौटमा परेका खेलाडिमध्ये ३ जना गोलकिपर, डिफेन्डर ७ जना, ६ जना मिडफिल्डर र ४...
बंगलादेशमा हुने एसीसी इमर्जिङ कप क्रिकेटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा
काठमाडौं, चैत २ । यही चैत १२ गतेदेखि बंगलादेशमा हुने एसीसी इमर्जिङ नेसन्स कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरिएको छ चैत २२ गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको लागि ४ वैकल्पिकसहित १९ जना खेलाडी छनोट भएका हुन् ।
आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपः नेपालले केन्यालाई ७ विकेटले हरायो
काठमाडौं फागुन ३० आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नेपालले केन्यालाई ७ विकेटले पराजित गरेको छ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा केन्याले १५६ रनको विजयी लक्ष्य नेपालले ३०.२ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। नेपालका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल ६४ र शरद भेष्वाकर २४ रनमा अविजित रहे। दिपेन्द्रसिंह ऐरीले ६२ र सागर पुनले ५ रनको योगदान दिए।
यसअघि टस हारेर पहिले व्याटिङको निम्तो पाएको केन्याले ४६.१ ओभरमा अल आउट हुँदै १५५ रन बनाएको थियो। केन्याका लागि कोलिन्स ओवुयाले सर्वाधिक...
आज जित्नैपर्ने बाध्यतामा नेपाली क्रिकेट टिम, आजको जितले यसरि राख्छ विश्वकप यात्राको बाटो खुल्ला!
सन् २०१९ को विश्व कप खेल्ने सपनालाई जीवित राख्न नेपालले केन्याविरुद्ध आज हुने खेललाई जित्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ।आइसिसी विश्व लिग क्रिकेट च्याम्पियनसिपअन्तर्गत केन्याविरुद्धको पहिलो खेल ५ विकेटले गुमाइसकेको अवस्थामा नेपाललाई विश्व कपको छनोटमा टिकिरहन आजको खेल जसरी पनि जित्नु पर्ने आवश्यकता छ। नेपालले च्याम्पियनसिपअन्तर्गत १४ मध्ये ७ खेल हारिसकेको छ र अंक तालिकामा ३ खेल मात्र जितेर ६ अंकका साथ छैटौं स्थानमा छ। च्याम्पियनसिपमा समावेश ८ देशमध्ये...
आईसीसी विश्व क्रिकेट लिगमा आज नेपालले केन्यासँग दोस्रो खेल खेल्दै
३०,फागुन,काठमाडौं। आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा आज नेपालले केन्यासँग दोस्रो खेल खेल्दैछ । काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदानमा शनिबार भएको पहिलो खेलमा पराजित नेपाल आज जित निकाल्ने उदेश्यका साथ मैदानमा उत्रिनेछ ।
केन्यासँग आज हुने दोस्रो खेल पनि गुमाए नेपाललाई च्याम्पियनसिपको शीर्ष ४ भित्र पर्न कठिन हुनेछ । एक दिवसीय ढाँचामा नेपालले आजसम्म केन्यालाई हराउन सकेको छैन । आजको खेल जितेको खण्डमा नेपालले केन्या विरुद्ध एउटा कोशेढुंगा पार गर्नेछ । पहिलो खेलमा नेपाललाई...
विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत किर्तिपुर मैदानमा सम्पन्न खेलमा आफ्नै भूमिमा केन्यासँग यसरी हार्‍यो नेपाल
काठमाडौं– विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल केन्यासँग ५ विकेटले पराजित भएको छ ।
घरेलु टोली नेपाल कीर्तिपूरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपाल केन्यासँग ५ विकेटले पराजित भएको हो ।
नेपाल र केन्याबिच किर्तिपुर मैदानमा जारी खेल बर्षाका कारण फेरि रोकियो, के हुन्छ अब?
काठमाडौं, २८फागुन । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत केन्या र नेपालबिचको खेल पानी परेका कारण रोकिएको छ । पहिले ब्याटिङ गरिरहेको नेपालले ३६ ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा १११ रन बनाएको अवस्थामा पानी परेकाले खेल रोकिएको हो । बिहान पनि पानी परेकाले खेल ३८ ओभरमा छोट्याइएको थियो । अब दुई ओभरको खेल हुन बाँकी छ । शनिबार लगातार पानी परेमा आइतबार खेल हुनेछ । सोमापाल कामी र शक्ति गौचन क्रिजमा छन् । नेपालका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले २७,...
फिलिपिन्स विरुद्ध एसिया कप छनोट खेल खेल्ने खेलाडी चयन, को को परे टिममा?
काठमाडौँ, २७ फागुन । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले एसियन कप छनोटअन्तर्गत फिलिपिन्सविरुद्वको खेलका लागि आज २७ खेलाडी छनोट गरेको छ । राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक ग्योतोकु कोजीले पहिलो चरणमा रहेका ३६ खेलाडीमध्येबाट उनीहरु छनोट गरेको एन्फाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
त्यस्तै चोटका कारण राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठ टोलीमा परेनन् । गत वर्ष बङ्गलादेशमा भएको बङ्गबन्धु कप र भारतमा भएको बाह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेका श्रेष्ठको अहिले खुट्टामा चोट लागेको...
चुनौतीका पाहाड उक्लिदै नेपाल, आज केन्या विरुद्ध मैदान झर्दै
काठमाडौं, फागुन २८ । कप्तान पारस खड्काको खेल्ने सम्भावना न्यून भए पनि नेपालले शनिबार आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग (डब्लुसिएल) अन्तर्गत केन्याविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै छ ।
पछिल्ला आठ वर्ष नेपालले खेलेका हरेक अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका खड्काको यसै महिना पेटको शल्यक्रिया भएको थियो । जसका कारण उनी फिट छैनन् ।
कप्तान खड्का मैदानमा उत्रने सम्भावना कम भए पनि पाँचपटक एकदिवसीय विश्वकप खेलेको केन्याविरुद्ध नेपालले कडा चुनौती दिने...
काठमाडौ । अन्तिम १६ को दोस्रो लेगमा ऐतिहासिक पुनरागमन गर्दै स्पेनिस क्लब बार्सिलोना युइएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वाटरफाइनलमा पुगेको छ । बुधबार राति घरेलु मैदानमा भएको दोस्रो लेगमा फ्रेन्च लिग क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) लाई ६–१ ले पराजित गर्दै समग्रमा ६–५ को जितसहित बार्सिलोनाले क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएको हो ।
पिएसजीको घरेलु मैदानमा भएको पहिलो लेगमा बार्सिलोना पिएसजीसँग ४–० ले हारेको थियो । तर, बार्सिलोनाले...